Cami- Analamahitsy cité : hamafisina ny firaisankinan’ny mponina | NewsMada
Cami- Analamahitsy cité : hamafisina ny firaisankinan’ny mponina
Hanao hetsika eo amin’ny sehatra maintso, anio tontolo andro, ny mponina ao Analamahitsy Cité mivondrona ao anatin’ny Cité Analamahitsy mihetsika (Cami). « Hetsika hanamafisana ny firaisankinan’ny mponina sy hanatsarana ny fifampitaizana eo amin’ny samy mpiray fokontany ny tanjona », araka ny fanazavan’ny mpitondra tenin’ny mpikarakara, Rahajaniaina Andrianarivony, omaly. Hanomboka amin’ny 9 ora maraina ny lanonana miendrika fivoriam-pianakaviana iarahan’ny ankizy sy ny tanora ary ny olon-dehibe rehetra monina ao amin’ny cité Analamahitsy. Hisy kilalao samihafa hampiala voly ny ankizy. Eo koa ny tafatafa sy fifanakalozana vaovao ho an’ny olon-dehibe izay horavahin’ny mpanakanto maro satria namoaka artista betsaka ny cité Analamahitsy. Anisany ry Belolo, Laingo…
Tsy hifarana ny fiarahana raha tsy maty ny masoandro, efa nanomana sakafo sy zava-pisotro azon’ny rehetra vidiana eo an-toerana ny mpikarakara hanalana fahasahiranana. Iarahana amin’ny mpitantana ny fokontany ny hetsika.
Vinan’ny mpanomana ny hametraka ny Cami ho rafitra ara-panjakana mba hitondra fanatsarana ny tanàna sy hitaiza ny fiarahamonina amin’ny lafiny maro. Niorina ny taona 1962 ny Cité Analamahitsy ahitana trano manodidina ny 550 eo ho eo. Mampiavaka ny fokontany ny fandriampahalemana sy ny fahadiovana ao anatiny raha mitaha amin’ny fokontany hafa mifanila aminy.